Ny toerana tsara indrindra amin'ny placenta dia akaiky kokoa ny faritry ny tranonjaza, matetika eo amin'ny rindrina anoloana, ary tsy dia matetika loatra - any aoriana. Tsy voatery miditra tanteraka ny placenta ary manomboka mivoatra tanteraka eto amin'ity toerana ity, ary io organika tena ilain'ny zaza io dia mifatotra amin'ny lafiny mifanohitra amin'ny tranonjaza misy ny tranonjaza.
Miankina amin'ny toeran'ny fidirana dia miavaka ny placenta:
Ny fanehoana an-tsisim-pejy momba ny placenta dia voafaritra mandritra ny dingana faharoa fikirakirana, mandra-pahatongan'izany fotoana izany dia afaka mihetsika ny placenta ary mitsangana amin'ny toerany ara-dalàna avy amin'ilay diso efa napetraka teo aloha. Na izany aza dia mety ho akaiky kokoa ny fiterahana ny fanadihadiana farany. Ity patolojia ity dia antsoina hoe fampisehoana ampahany. Ao amin'ny fampisehoana an-tsisim-pejy, ny pharynx uterine dia voasakana eo amin'ny sisin'ny placenta amin'ny ampahatelony.
Ny placenta Regional previa - ny antony
Ny antony mahatonga ny fanehoana an-tsisim-pejy dia azo afenina amin'ny fahasalaman'ny vehivavy. Ny antony mahazatra indrindra dia efa nisy tratran'ny aretina, ny fanalan-jaza taloha, ary ny fahasarotana tamin'ny vohoka voalohany. Ankoatr'izay, ny fanolorana dia hita ao amin'ny vehivavy izay voan'ny aretin-tsiranoka avy amin'ny uterine na manana fitondran-tena maloto amin'ny fitondran-tenan'ny uterine. Ny endometriozy koa dia mety miteraka fihenam-bidy ny placenta. Raha ny marina, amin'ity tranga ity, ny atody foetal dia mifatotra amin'ny ampahany amin'ny tranonjaza izay ahitana ny lafy tsara indrindra amin'ny endometrium. Ny toerana tsy fantatra momba ny placenta dia matetika voarakitra ao amin'ny vehivavy miaraka amin'ny fahaterahana maro.
Inona no fanehoana an-tsisim-bary mampidi-doza ny placenta?
Amin'ny fampisehoana an-tsisim-bolana dia mety hianjera ny vehivavy iray. Amin'io tranga io dia manomboka tsy misy tampoka ny fandehanana ra, tsy misy fahatsapana hafahafa sy fanaintainana ho an'ny vehivavy bevohoka. Matetika, ny vanim-potoanan'ny loza dia manomboka amin'ny trimoestery fahatelo amin'ny 28-32 herinandro ny fitondrana na mandritra ny asa.
Miaraka amin'ny fampisehoana diso ny placenta, anisan'izany ny krai, dia matetika no voan'ny aretina ny fampijaliana. Azo jerena koa amin'ny fihisatry ny bevohoka bevohoka - ambany tosidra; ary ny fandrosoan'ny tsy anemia dia tsy voafehy. Ankoatr'izay, amin'ny fanolorana mari-pana, ny zaza dia mety hihevitra ny toerana tsy mety ao amin'ny lava-tranon'ny tranonjaza, izay mitaky fiverimberenan'ny chiropage.
Ny placenta regione previa - fitsaboana
Amin'ny ankapobeny dia tsy ampiasaina ny fitsaboana sasany amin'ny fitsaboana ny fanolorana marginal. Ireo hevi-dehibe dia ny fialan-tsasatra na ampahany amin'ny reny. Izany dia tsy misy vatomizana. Noho ny firaisana ara-nofo amin'ny fanehoana an-tsisim-bazana ny placenta, toy ny amin'ny karazana hafa dia tsara kokoa ny mandà.
Na izany aza, miaraka amin'ny fampisehoana an-tsisim-pejy, ilaina ny fanaraha-maso fitsaboana ary ny diany isaky ny fotoana. Ny fampitoviana lehibe tokony hodinihina dia ny fitsapana ny ra amin'ny hemoglobinina sy ny fiterahana. Raha ny zava-drehetra, raha mivoatra ny anemia, vehivavy iray dia mila mandidy ny zava-mahadomelina misy vy. Tokony ho ara-dalàna ny fifangarohan-dra raha misy ra. Ny fanadinam-panahy koa dia mandre matetika tsy tapaka. Ary, mazava ho azy, ultrasound, izay afaka mamaritra tsara kokoa ny fiovana eo amin'ny toerana misy ny placenta.
Fahaterahana amin'ny fampisehoana placenta
Ny fanapahan-kevitra momba ny fomba hanolorana ilay fitaterana dia hatao amin'ny mpitsabo mpanatrika, ary koa ny dokotera izay milefa. Noho izany, tsara kokoa ny mifandray amin'ny paroasitera mialoha ny fanombohan'ny asa.
Ny fahaterahana amin'ny fanehoana an-tsisim-bary ny placenta dia mety ho azo avy amin'ny natiora, raha tsy misy indraindray hafa amin'ny fitantanana fizarana sesareana . Miaraka amin'ity aretina ity, ny ra mandriaka, raha ny fitsipika, dia tsy mihetsi-po sy mijanona raha vantany vao misaron-tava ny lohan'ny zaza. Na izany aza, dia misy hatrany ny mety hitrangan'ny asa amin'ny fomba mahomby, na izany aza, matetika dia azo atao ny mametraka mazava hoe ny habetsaky ny placenta dia nanakana ny tonon-taolam-paty raha tsy aorian'ny fanokafana ny mati-vavy amin'ny 5-6 cm.
Ao amin'ny ambaratongan'ny fitsaboana maoderina sy ny fitsaboana, ny vehivavy iray izay voan'ny aretina azo avy amin'ny sehatra dia tsy manahy ny fiainany sy ny fiainan'ny zanany.
26 herinandro fitondrana - fetra dimanjato
Herinandro 4 isaky ny fitondrana vohoka
Ny fampitahorana ny fiterahana voalohany - ny soritr'aretina, ny fitsaboana
Ny herinandro faha-36 amin'ny maha-bevohoka dia manjary mpialoha lalana amin'ny asa an-terivozona
Ny proteina amin'ny urine ao amin'ny vehivavy bevohoka
Herisetra eo amin'ny vohoka eo amin'ny fitondrana vohoka
Sakafo any amin'ny hopitaly - lisitra
Afaka manao firaisana ve ny vehivavy bevohoka?
Ny marika voalohany momba ny fitondrana vohoka
Ahoana ny hamaizana volo fohy?
Fomba "Cubes of coax"
Borosy ho an'ny akanjo
Erythrocytenina amin'ny urine - ny fenitra na ny fiviliana?
Seza plastika ho an'ny lakozia
Aiza i Nina Dobrev bevohoka?
Ahoana no handoavana ny trosanao?
Karazana andraikitra sosialy
Hividy tantely sy voanio ao anaty lafaoro
Safidy amin'ny fametrahana koveta ao an-dakozia
Fanazaran-tena miaraka amin 'ny milina fanontam-pirinty
Ahoana no hiomanana amin'ny firaisana ara-nofo?
Inspiration - inona no tokony hataonao raha very ny aingam-panahinao, ary aiza no hitadiavana azy?
Fitaovana ho an'ny takelaka fitaratra vita amin'ny fitaratra
Ahoana no fialana amin'ny fianarana?
Abidjanan'i Westminster any Londres
Fahafatesana 10 andro isam-bolana
Ahoana no hamantarana ny fametahana fitiavana?